Maitiro ekusarudza yakanakisa iPad yekoreji | Nhau dze iPhone
Maitiro ekusarudza yakanakisa iPad yekoreji
Iyi ndeimwe yesarudzo dzatinofanira kuita dzimwe nguva uye dzakaoma kupindura nekuda kwezvikonzero zvakati. Kutanga uye pamberi pezvese, iyo iPad yekoreji inogona kunge iri nyore kusarudza zvichienderana neashoma zvinhu. Nguva dzose economic factor inofanirwa kuverengerwa. uye izvi ndezvevazhinji vedu dambudziko guru pakusarudza iPad kana imwe.
Hapana mubvunzo kuti kana uine mari unogona kusarudza iyo iPad yaunoda, zvisinei nezvinodiwa kana simba raunoda, zvirinani kana zvakaipisisa skrini, yakakura kana kushoma kugona, nezvimwe. Chero zvazvingava, nhasi tichaona zvimwe zvezvinhu zvikuru zvinogona kutisarudzira kune kutengwa kweiyo chaiyo iPad modhi yeyunivhesiti.
Kubva pakutanga isu tinofanirwa kutaura kuti ese mamodheru ePad ayo kambani yeCupertino mune kabhuku kayo anogona kubatsira kuyunivhesiti, isu hatifanirwe kuvhara chero magonhi pane aya maPad modhi kubvira. munhu wese ane kugona kwakakwana kwekubatsira mumabasa ekukoreji uye kubva kwavari. Chinhu chakanakisa nezve iPad ndechekuti chishandiso chinogoneka uye inopa vese vashandisi maficha, dhizaini, simba uye mhando.
1 Iyo modhi yekusarudza inofanirwa kuve ine shoma skrini
2 Iyo 10,2-inch iPad inogona kunge iri mumiriri akanaka
3 iPad Air inogona kuva yakanaka kwazvo sarudzo
4 Iyo iPad Pro uye mamwe ese maPad modhi
Iyo modhi yekusarudza inofanirwa kuve ine shoma skrini
Pamwe vazhinji venyu vangafunga kuti iyo iPad mini mukwikwidzi akanaka kuyunivhesiti, iyi iPad ine mutengo wakanaka wemari asi kunyangwe uine rutsigiro rwekibhodhi. kwete yakanyanya skrini kuti tinoti kuona magwaro kana mafaira mairi. Iyi iPad ine akawanda mapoinzi akanaka kana ichienzaniswa nehama dzayo hombe, asi kumabasa eyunivhesiti isu tinofanira kuodza mwoyo kutenga kwayo.
Ichokwadi kuti ichangoburwa chizvarwa modhi ye iyi iPad mini ine chaiyo yakanaka processor simba uye skrini yemhando asi sekutaura kwatinoita ichiri chiyero chakanaka zvichienderana nekuti ndeapi mabasa achaitwa nawo.
Ngazvive izvo, kana iwe uri mumwe weavo vari murudo neiyi saizi yePad nekuda kwekugona kwayo uye simba sarudzo. Isu tinokurudzira yazvino modhi yePad mini. Mune ino kesi tinowana imwe diki skrini nekuda kwekubviswa kwemafuremu uye dhizaini yakafanana neiyo hombe iPad. Ramba uchifunga kuti pamutengo wePad mini tinogona kuve ne10,2-inch iPad, inova inotevera yatichazoona.
Iyo 10,2-inch iPad inogona kunge iri mumiriri akanaka
Iyo Cupertino kambani pachayo inoitengesa seyakatwasuka kumusoro iPad yemazuva ekoreji inopa akawanda ezvimiro zvinoita kuti ive yakanaka iPad yevana vekoreji. Iyi iPad ine 13 Bionic chip uye haizopunzike mune chero emabasa atinoda kuishandisa. Uyezve, yake 10,2-inch skrini yakanyatso kurongeka kune vana vekoreji vasingade kuve neIpad idiki kana yakakura kwazvo.
Yakasimba, inoshanda zvakasiyana uye iri nyore kushandisa. Iyo iPad itsva yakagadzirirwa kuti iwe unakirwe nezvaunoda zvisina kumbobvira zvaitika. Shanda, tamba, gadzira, dzidza, taurirana uye chiuru zvimwe zvinhu. Zvose zvishoma pane zvaunofungidzira.
Hapana mubvunzo iyo yakasimba pfungwa yei iPad iyi mutengo wayo. Dhizaini inopihwa neiyi iPad ndeyevazhinji vekare asi inopfuura zvakakwana kuti tiende nayo kuyunivhesiti uye kutiburitsa mudambudziko chero ripi zvaro kunze kwayo, pasina kupokana iyi ndeye vazhinji vedu yakanakisa iPad yatinogona kutenga kana yasvika. kuenda kukoreji kana kunakidzwa nazvo kumba. Iyi iPad modhi inogona kuwanikwa pawebhusaiti yeApple ye379 €, asi kana iwe uri mudzidzi wepayunivhesiti, yeuka kuti une dhipatimendi saka inogona kunge yakachipa chaizvo.
iPad Air inogona kuva yakanaka kwazvo sarudzo
Imwe yenyeredzi iPad yekambani yeCupertino ndeye iyo iPad Air. Iyi iPad inopa mushandisi shanduko yedhizaini ichienzaniswa neiyo 10,2-inch modhi yakambotaurwa muchinyorwa chino, tinogona kutaura kuti dhizaini yePad Air yakatangwa neApple ndeimwe yeakanakisa uye anoshanda.
Mukuwedzera, iyo itsva iPad Air inopa mushandisi sarudzo yekushandisa Bata ID uye kwete Face ID, izvi zvakanaka kune vakawanda vashandisi uye zvakaipa kune vamwe vazhinji. Chero zvazvingava, iyo yazvino iPad Air inogona kuve yakanakira imwe nzira vashandisi vari kufunga kutora iPad kuenda navo kukoreji.
Pane iyi iPad modhi mutengo watokwira kusvika ku649 euros mune yayo vhezheni ye64 GB yekuchengetedza mukati. Mutengo uyu, usingadhure zvakanyanya, unogona kudzikiswa nezvipo zvevadzidzi veyunivhesiti uye unogona kuwedzera Apple's Magic Keyboard, iyo pasina mubvunzo inopa chibereko chikuru kuchikwata. Kana iwe uchidawo kuwedzera Apple Penzura, iwe une kit yakakwana, iri pamutengo wakakwira kupfuura iyo iPad Air chete inodhura.
Iyo iPad Pro uye mamwe ese maPad modhi
Kune rimwe divi uye kupedzisa nekurudziro iyi yevanokwanisa kukwikwidza kune vese vadzidzi veyunivhesiti vanoda iPad, hatigone kusiya padivi maPro modhi yekambani. Iwo ese akasiyana ePads anonyanya kunakidza kukoreji uye kunze kwekoreji, asi hongu kana tikafunga iyo iPad Pro seyekutenga sarudzo, inogona zvakare kubatsira zvakanyanya.
Zviripachena pano mutengo unopinda zvizere uye ndeyekuti aya maPads ndiwo anodhura mamodheru ayo kambani yeCupertino ine mukatalogi yayo, saka vese vari vakanaka vakanaka chero bedzi homwe ichibvumira. Kufanana nemamwe maPad modhi atinogona shandisa Magic Keyboard, Apple Penzura, uye zvimwe zvinhu kubva kuPadad renji asi mune iyi nyaya isu tinewo sarudzo yekusarudza yakakura modhi ine 12,9-inch skrini, ine M1 chips uye Liquid Retina skrini.
Mune ino kesi, iyo iPad Pro inotanga pa879 € mune yakanyanya kukosha pro modhi ine 128 GB yenzvimbo yekuchengetedza. Sezvimwe nezvimwe zvemidziyo uye uine kadhi rekuyunivhesiti iwe uchave nemitengo pazviri asi hongu, mune iyi kesi haina pundutso senge mune mamwe ese ezvishandiso zvePad muhuwandu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPad » Maitiro ekusarudza yakanakisa iPad yekoreji
Qualcomm inounza isina kurasikirwa odhiyo kune isina waya mahedhifoni nemachipi ayo matsva
Dambudziko rinotevera rakakosha richave munaKurume 8 reInternational Women's Day